Hanara-dia an’i Tonizia sy i Egypta va i Alzeria? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Febroary 2011 4:30 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, 简体中文, 繁體中文, Português, Ελληνικά, Français
Ity lahatsoratra ity dia fitantarana manokana momba ny Fihetsiketseham-bahoaka taona 2011.
Na dia teo aza ny fionganan'ny Filoha Toniziana Zine El Abidine Ben Ali, taorian'ny fikomiana sy ny fanerena ny Filoha Egyptiana Hosni Mubarak hiala, dia mbola tsy nidina an-dalambe ny mponina Alzeriana .
Ho an'ilay mpiserasera Alzeriana Dihya Roufi, ny fahasamihafana dia mazava [tsy hita intsony ny lahatsoratra amin'izao fotoana]:
Tsy ny fepetra noraisana momba ny fiarovana amin’ ny fihetsiketsehana ihany no nahakivy ny vahoaka mba tsy handray anjara. Sasany tamin'ireo mpikarakara ny diabe dia nankahalaina satria mpikambana tao amin'ny parlemanta ihany. Algerienmeskine nanoratra hoe [fr]:
Nanao ny azy koa i Khaled Satour tamin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe Alzéria: Ny fandrika « revolisiona arabo »” [fr]):